Malagasy aho: Antso an-taribin'ny Filoham-pirenena Marc RAALOMANANA
Antso an-taribin'ny Filoham-pirenena Marc RAALOMANANA
Hiaraha - mahita anefa ny zavamisy ary ny tsy fisian’ny fitoniana, ny hetraketraka sy ny fomba mamoafady samihafa. Koa dia mivory miaraka amin’dry zareo aty amin’ny SADC satria Madagasikara mambra feno ao amin’ny SADC. Mivory miaraka aminny SADC izahay miaraka amin’ny firenena rehetra aty afrika. Zava - dehibe ny fivoriana ataonay aty satria samy mitady izay hevitra rehetra sy fomba rehetra ary indrindra indrindra izay fitaovana mety ilaina hiverenana sy ahatongavana aty Madagasikara. Hoy aho aminareo hoe tsy maintsy atao izay hamerenana amin’ny laoniny ny fiainan’ny firenentsika satria mahamenatra, mampalahelo ny zava - misy ankehitriny. Tsy mahateny ary tsy hita izay hilazaina azy rehefa mampiseho sy mitantara ny zavatra miseho aho, koa dia miantso anareo izay diso lalana aho, zava - dehibe loatra izany hoe tombontsoam - pirenena izany. Asa dia ny tombontsoanao irery re no jerevana fa ny tombontsoam - pirenena. Amintsika miresaka izao dia kely ka tsisy vola fifanampiana omen’ny firenen - drehetra na ireo mpamatsy vola an’i Madagasikara. Tsisy firenena eto ambonin’ny tany mankato na manohana izao vatra misy sy fitondrana milaza fa hoe manana ny fahefana izao. Ny aty Mauritanie dia nilavo lefona ary namerina amin’ny fitondrana ara - dalana ny fahefana. Tsisy mihintsy ny firenena na ao anatin’ny constitution’ny African Union na ny union afrikana manaiky ny zava - misy, tena mahamenatra ny zava - miseho ary mampalahelo ary hita fa tsy sahaza ny vahoaka malagasy.
Nandritra ny roa andro izahay no nivory taty Libye ary nihaona taty avokoa ireo tomponandraikitry ny Union Afrikana, ny SADC, ho hitantsika eo ihany ny vokatr’izany fihaonana izany. Ny zavatra tiako resahina sy hamafisina amin’ny malagasy dia ny fiantsoana ny malagasy rehetra, ny antoko politika sy ny fikambanana fa presidan’ny vahoaka malagasy rehetra aho. Miantso anareo aho mba hampiseho ny fanohanana ny ara - dalàna.
Eto aho dia misaotra manokana sy mankasitraka ny fihetsiky ny vehivavy tamin’ny alakamisy, miainga avy ary ankorondrano, nahazo an’andraharo ho ren’ny firenena rehetra ary namponjy an’ambohijatovo. Misaotra ny vehivavy satria zava - dehibe ny fahasahiana nasehonareo. Misaotra ny vehivavy fa manana andraikitra sy anjara lehibe amin’ny fiainam - pirenena ianareo, amin’ny fampandrosoana ny firenena ary indrindra indrindra amin’ny ankohonana. Misaotra betsaka.